Ukoyisa uthando olungafunekiyo Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Indlela yokoyisa uthando olungafunekiyo. Ukuba unothando olungafunekiyo, unga fumana intuthuzelo nethemba kuYesu. UThixo unesicwangciso esifanelekileyo kuwe. Mhlawumbi loo mntu umkhathaleleyo akayonxalenye yesicwangciso, kodwa ayisosiphelo eso.
Kukho iintlobo ezininzi zothando olungaguqukiyo: phakathi kwabazali nabantwana, abazalwana, abayeni nabafazi, kunye nothando lothando. UThixo uyayiqonda intlungu yothando olungafunekiyo. Uthanda umntu ngamnye nge infinito uthando, kodwa abantu abaninzi abalufuni uthando lwabo. Kwiindawo ezahlukeneyo zebhayibhile, uThixo uthelekiswa nendoda elahliweyo ngumfazi, nangona eyinike lonke uthando lwayo. Okwangoku, uThixo akancami ukusinika uthando lwaKhe.
Kule nqaku, siza kuthetha malunga uthando olungathandekiyo phakathi kwabantu abangatshatanga. Kuyinto eqhelekileyo ukuthandana nomntu ongaziva ngendlela efanayo ngawe. Uthando alunabudlelwane, ngoko awukwazi ukuba nobudlelwane.
1 Ungalifumana njani uthando olungafunekiyo: Iingcebiso
1.1 1. Musa ukuhlala ithutyana
1.2 2. Yomelela kulwalamano lwakho noThixo
1.3 3. Zilumkele izigqibo ezinkulu ngoku
2 Ungathini ukuba umntu uyakuthanda, kodwa awuziva efanayo?
Ungalifumana njani uthando olungafunekiyo: Iingcebiso
Xa ufumanisa ukuba uthando lwakho alufuneki, inyathelo lokuqala yamkele loo nyaniso. Awunakho ukwenza ukuba umntu akuthande. NoThixo akenzi njalo! Unganikezela ngothando lwakho kuphela kwaye ulinde omnye umntu aphendule. Ukuba akunjalo, kufuneka sihloniphe isigqibo saloo mntu.
Sukuzama ukufumana amathemba akho phezulu. Ayithethi kuthi hayi. Ukuba umntu omkhathaleleyo ukwenze kwacaca ukuba abafuni kuba kubudlelwane nawe, yeka ukumleqa. Oku kuya kukwenzakalisa kuphela. Ubudlelwane busebenza kuphela xa nobabini nikunye. Kuya kufuneka uqale ngokuqhubeka nobomi bakho. Kwaye inyathelo lokuqala kukwamkela.
Bakha bahambe ndawonye na ababini, bengavani?
UAmosi 3: 3
1. Musa ukuhlala ithutyana
Hlala kude okwethutyana
IBhayibhile isitsho uthando luzeka kade umsindo, lunobubele, alufuni okukokwalo kodwa. Xa uthando lwakho lungafakwanga, eyona nto unokuyenza nguloo mntu kukuhlonipha izigqibo zakhe kunye nokuphepha ukuhlazeka. Sukuzingca, gcina umgama wakho.
Uthando luzeka kade umsindo, lulungile; uthando alunamona; uthando alugwagwisi; alukhukhumali;
ayenzi nanye into engafanelekanga, ayifuni eyayo, ayicaphuki, ayinanzondo.
Eyesi-1 kwabaseKorinte 13: 4-5
Ukubona ukuba uthando lwakho alufuneki kubuhlungu, ke, Intliziyo yakho ifuna ixesha lokuphola. Ukusondela kakhulu kwinjongo yothando lwakho kuphela kwenza inkqubo ibe nzima. Awudingi ukunqumla bonke ubudlelwane, kodwa kuphephe ukusondela kakhulu kulo mntu, ngakumbi ekuqaleni.
2. Yomelela kulwalamano lwakho noThixo
Fumana amandla kulwalamano lwakho noThixo
Unokuba uthanda kakhulu kwaye akakho omnye umntu oza kugqiba ubomi bakho. Nangona kunjalo, olona lwalamano lubalulekileyo unalo noYesu. Ngamaxesha anje oku ufuna uYesu kakhulu, ukuze akuthuthuzele kwaye unike ubomi bakho injongo.
KuYesu, uthando lwakho lungaphezulu kokubuyekezwa! Nguye ongasoze akuphoxe. Ngawo onke amaxesha, UYesu uhlala ekhona kwaye unamandla okukunceda ukoyisa intlungu yothando olungenaxabiso.
UThixo uyazi okona kukulungeleyo. Ukuba uthando lwakho alufuneki, ke uThixo unezinye izicwangciso zobomi bakho.. Thandazela ukuba ukuthanda kukaThixo kwenziwe ebomini bakho, uzithobe kwintando yakhe.
Banoyolo abo batshutshiswa ngenxa yabo! Ubulungisa, kuba ubukumkani bamazulu bobabo.
UMateyu 5: 9-10
3. Zilumkele izigqibo ezinkulu ngoku
Lumkela kwizigqibo ezinkulu ngoku
Xa usokola ukubuyela umva, njengokufumanisa ukuba uthando lwakho aluphelelwanga, kunokuvela isilingo sokwenza into ebubudenge. Ezinye izinto ezithi Hayi Izinto zokwenza ukujongana nentlungu yentliziyo eyaphukileyo zezi:
Zinikezele sukela uthando lwakho engafunekiyo.
Zinikezele guqula uthando lwakho lube yintiyo.
Ukufuna intuthuzelo etywaleni okanye iziyobisi.
Ukuthandana okanye ukutshata nomntu kungekudala, Ukuze ungabi wedwa.
Nika yonke into ebomini.
Shiya yonke into ukubutshintsha ngokupheleleyo ubomi bakho
Kwintlungu yokuthanda, ingqondo yakho ayisebenzi kakuhle. Ngoko ke, ukwenza izigqibo ezingqwabalala asiyongcamango ilungileyo leyo oko kuya kuchaphazela bonke ubomi bakho ngelo xesha. Linda ude uzole. Ngezigqibo ezinkulu, sukungxama.
Iingcinga zabakhutheleyo ngokuqinisekileyo zithambekele ekubeni nentabalala;
Kodwa wonke umntu obaleka ngokungxama, ngokuqinisekileyo uya kwintlupheko.
IMizekeliso 21: 5
Ungathini ukuba umntu uyakuthanda, kodwa awuziva efanayo?
Akunyanzelekanga ukuba uzive ngokufanayo ngomnye umntu. Kungcono ukunyaniseka kunokuzama ukuzinyanzela ukuba uzive ngendlela efanayo. Ubudlelwane bokunganyaniseki bufile ngaphambi kokuba buqale. Ukuba uziva ngathi obu bubudlelwane ongafuni ukuba nabo, yenza iimvakalelo zakho zicace komnye umntu. Esi sisigqibo sakho kwaye akukho mntu unelungelo lokukunyanzela ukuba udibane nomntu ongamthandiyo.
Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokufumana ngaphezulu kothando olungafunekiyo. Ukuba ufuna ukwazi indlela yokuqonda ubudlelwane obunobundlobongela kunye nendlela yokwenza ngokweBhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.